XOG:- Maxay yihiin xerta hubeysan ee Baxdo ee mar kasta casharka u dhigta Al-shabaab? | Entertainment and News Site
Home » English News » News » XOG:- Maxay yihiin xerta hubeysan ee Baxdo ee mar kasta casharka u dhigta Al-shabaab?
XOG:- Maxay yihiin xerta hubeysan ee Baxdo ee mar kasta casharka u dhigta Al-shabaab?
daajis.com:- Dagaal sababay khasaaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa Shalay ka dhacay deegaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud.
Waxaa u jooga mashaa’ikh ay mar walba ku xiran yihiin oo u ah hoggaamiyeyaal diimeedyo. Xertaas intooda badan qoysas iyo ganacsiyo ku leeyihiin magaalada oo ay deggan yihiin. Sidoo kale, dadka qaraabada la ah ama ay ehelka yihiin ee ku sugan deegaanka iyaga ayay mabda’ ahaan taabacsan yihiin. Waa wadaaddo bulshada deegaanka Baxdo u ah indheer-garad. Sidaas daraaddeed, mar kasta oo la soo weeraro Baxdo iyaga ayaa ah ciidan oo ka hortaga.